Moments Neshamwari 2
Ko Theosophist anotenda mashura here? akabvunzwa mumwe wepabato reshamwari kwete kare.
A Theosophist anogashira zvese zvinoitika, uye haatomborasikirwa nechikonzero. Asi iyo Theosophist haina kumira uye kuzorora zvemukati nechokwadi; anoedza kuitsvagira kubva kwayakabva uye kuona mhedzisiro yayo. Kutenda mashura kutenda kana kuita kwechimwe chinhu usinganyatso kuziva chikonzero nei. Nenzira yakajeka, kutenda mashura ndiko kubvumidza kwepfungwa kune pfungwa kana tsika pamusoro pedzimwe tsika pasina chimwe chikonzero chekutenda. Mashura avanhu ndiwo madimikira eruzivo rwakakanganikwa. Zivo yaenda, uye avo vaive neruzivo, vanhu vanoenderera mberi nemuitiro wemafomu; uye saka mafomu nekutenda zvinopihwa patsika kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe. Sezvo zvavanowedzera kure nerubatsiro vanonamatira padhuze nepamusoro pezvavanotenda uye vangatowedzera kuve shasha. Muitiro usina ruzivo izere mashura. Shanyira makereke muguta rakakura paSvondo mangwanani. Ona tsika dzekunamata; tarisa mafambiro emaprisita; cherekedza kusarudzika kwehofisi yeavo vanoita basa; cherekedza zvifananidzo, zvishongo zvitsvene, zviridzwa, nezviratidzo; teerera kudzokorora uye nzira yekunamatira kune-chii? Tinogona here kupomera mumwe asina kujairana neizvi zvese nekudana kuti mashura, uye nekutaura kuti isu tiri vanhu vane mashura? Isu tinosisira kufunga nezve zvinotendwa zvevamwe izvo zvisingawanzo kuve mashura kupfuura vanhu vedu. Mashura anoitwa nevaya vatinodaidza kuti "vasingazivi" uye "vanotenda," anofanirwa kunge aakabva. Vanozoziva vanofanira kutsvaga tsika kana mashura kubva kwavakabva. Kana vakazoita izvi vanowana ruzivo, izvo zvinopesana nekusajeka kwavo — kutenda mashura. Kufunda kusasarura kwemashura emunhu kunozivisa kusuwa kwenhamo kwega. Enderera mberi nekufunda uye zvinotungamira pakuziva kwako.
Ndeipi nheyo iripo yekutenda mashura iyo munhu akazvarwa aine "caul" angave aine humwe hunyanzvi hwemashura?
Iyi dzidziso inouya ichidzika kuburikidza nemazera kubva pamazuva ekare, apo vanhu vaibata hukama nevanhu mukati nekutenderedza pasi. Ipapo kuona kwemunhu, kunzwa uye humwe hunhu hwemweya hwemashura, hwakafukurwa nekukura kuva hupenyu hwepamoyo uye hwepanyama. Iko hakuna chikamu chemuviri wemunhu icho chisina hukama nehumwe simba uye simba mune imwe kana zvimwe zvisingaonekwi zvepasirese echisikigo. Icho chinonzi "caul" chine chekuita nenyika yepadreral. Kana, kana munhu achinge aberekerwa munyika ino yepanyama, caul inoramba iinaye inotsika kana kufadza muviri wemuastral nehumwe hunhu uye inowanikidza kune nyika yeastral. Muhupenyu hwapashure zvimiro izvi zvinogona kukurirwa, asi zvisina kunyatso shandiswa, sezvo iyo linga sharira, iyo astral dhizaini muviri, inobatanidzwa kugamuchira zviono kubva kuchiedza cheredral. Mashura anofambiswa nevanhu vanofamba negungwa nechisimba ichi, nezvechimiro che "rombo rakanaka" kana sechinhu chinodzivirira kuti chisanyura, zvinovakirwa pachokwadi chekuti sezvo chitaviridzo kumucheche kubva kuzvinhu zvakashata mune yekutanga. Nyika, saka inogona ikozvino munyama yekudzivirira kubva panjodzi yemvura inoenderana nechiedza cheredral uye zvinhu izvo, kunyange zvichinzi ndezvemuviri, hazvisi izvo zvisinganyatsoita zvemashiripiti uye zvinobva munyika yevazivi.
Kana pfungwa inogona kupfuudzwa kune imwe pfungwa, nei izvi zvisingaitwe nenzira kwayo uye nehungwaru hwakawanda sekukurukurirana kunoitwa nguva dzose?
Izvo hazviitwe nekuti isu hatitaure “mupfungwa” mukufunga; uye hatisati tadzidza mutauro wepfungwa. Asi zvakadaro, mifungo yedu inoendeswa kundangariro dzevamwe kazhinji kazhinji kupfuura zvatinofungidzira, kunyange zvisingaitwe zvinehungwaru sezvataigona kutaurirana nekuti isu hatina kumanikidzwa nokudikanwa kwekutaurirana nemumwe kuburikidza nekufunga chete, uye, nekuti isu hazvingatore dambudziko kudzidzisa pfungwa nepfungwa kuti zviite. Mumwe anozvarwa pakati pevanhu vakasarudzika anochengetwa, anodzidziswa, anorangwa uye anodzidziswa nzira dzevabereki kana denderedzwa raakazvarirwa. Mira asi kuti ufunge, uye zvichave panguva imwechete zvichiona kuti zvinoda makore mazhinji ekutsungirira parutivi rwe mudzidzisi uye kushingirira kushingirira pane chikamu cheiyo mudzidzi kudzidza hunyanzvi hwekutaura nekuverenga nekunyora mutauro, uye kudzidza tsika, tsika uye nzira dzekufunga mumutauro uyu. Kana zvichida kuedza kwakadai uye kudzidziswa munyika ino yekudzidza kudzidza mutauro mumwe, hazvishamise kuti vanhu vashoma vanokwanisa kutamisa pfungwa nenzira kwayo pasina kushandisa mazwi. Hakuchisiri chipoko kungoisa pfungwa pasina mazwi kupfuura kuita pfungwa nekushandiswa kwemashoko. Musiyano ndewekuti isu takadzidza kuzviita munyika yekutaura, asi tichingoramba tisina kusarudzika sevana vasina kutaura munyika yemafungiro. Kuchinjana kwepfungwa neshoko kunoda zvinhu zviviri: iye unotaura, uye iye unoteerera; kuendesa ndiko mugumo. Izvi tinoziva maitiro, asi nzira chaiyo yatinotaura uye nekunzwisisa zvakaita soun'anga kwatiri sekushandisira kwepfungwa pasina mazwi. Hatizive sei uye nenzira dzipi nhengo dzakasiyana mumuviri dzinoshanda kuitira kuti kubudise ruzha runotaurwa; isu hatizive nemaitiro api iwo sauti yakataurwa inofambiswa kuburikidza nenzvimbo; isu hatizive kuti ruzha rwunogamuchirwa sei neiyo tympanum uye neruzha rwekunzwa; kana nemaitiro api anodudzirwa kune kungwara mukati uyo anonzwisisa iyo pfungwa inoburitswa neruzha. Asi isu tinoziva kuti zvese izvi zvakaitwa, uye kuti tinonzwisisana mushure meimwe fashoni yakadaro.
Tine chero chinhu here chinoenderana nemafambisirwo ehunyanzvi hwekufunga?
Hongu. Iyo telegraphic uye mapikicha maficha akafanana chaizvo neiyo yekutamisa pfungwa. Panofanira kunge paine anoshanda anotumira meseji yake, panofanira kunge paine anogamuchira anozvinzwisisa. Saka saka panofanira kunge paine vanhu vaviri vakarangwa, vakadzidziswa kana kudzidziswa kupfuudza uye nekugamuchira mifungo yemumwe neumwe kana vachizozviita nehungwaru uye nekukwenenzvera kumwechete uko kunoitwa nehungwaru kukurukurirana hurukuro, sevanhu vaviri vanofanirwa kutaura mutauro mumwe chete kana vaizotaurirana. Zvinonzi vanhu vazhinji vanokwanisa kuzviita izvi, asi vanozviita chete nenzira isina huchenjeri, nekuti ivo havadi kuendesa pfungwa kunzira yakaoma yekudzidziswa. Uku kudzidziswa kwepfungwa kunofanirwa kuve kwakarongeka, uye kuitiswa nekutarisira kwakawanda, sehupenyu hwenyanzvi muchikoro chakarongeka.
Tinogona sei kutaurirana nekufunga zvinehungwaru?
Kana munhu achinyatso tarisisa ake ega nepfungwa dzevamwe, anozosvika pakuziva kuti pfungwa dzake dzinotumirwa kune vamwe nezvimwe zvisinganzwisisike maitiro. Iye uyo angazotaurirana nekufunga pasina kushandisa mazwi anofanira kudzidza kudzora mabasa epfungwa dzake. Sezvo mabasa epfungwa achidzorwa, uye mumwe achikwanisa kubata pfungwa zvakadzama pane chimwe chinhu chimwe, zvichanzwika kuti pfungwa dzinogadzira fomu, inotora chimiro nehunhu hwechinhu icho chiri kutariswa, uye pa kamwe inopa ichi chirevo kana pfungwa kune chinhu chakanangiswa nacho, nekuchiida ipapo. Kana izvi zvikaitwa nemazvo, iye munhu akanongedzwa kwaari pfungwa, zvirokwazvo achachigamuchira. Kana ikasaitwa nemazvo panogona kunge paine fungidziro yekuti chii chakanangidzirwa. Nezve kuverenga kana kuziva nezvepfungwa, mabasa epfungwa anofanirwawo kudzorwa kana iyo pfungwa yeimwe ichizogamuchirwa nekunzwisiswa. Izvi zvinoitwa nenzira imwechete kuti munhu akangwara anoteerera kumashoko eumwe. Kuti anyatsonzwisisa munhu anofanira kunyatsoteerera kumashoko anotaurwa. Kuti unyatsoteerera pfungwa dzinofanira kubatwa zvakanyarara sezvinobvira. Kana pfungwa dzisina basa dzichipinda mupfungwa dzevateereri hanya yakakosha haina kupihwa, uye mazwi, kunyangwe akanzwika, haanzwisisike. Kana mumwe akaverenga pfungwa dzeimwe pfungwa dzake dzinofanira kubatwa mune yekuteerera isina chinhu kuitira kuti fungidziro yefambisirwo ipfungwa igone kuchengetwa zvakajeka uye zvakajeka. Zvino kana iyo pfungwa yakajeka uye yakasarudzika hakuzove nekunetseka chero kupi mukunzwisisa kwayo. Isu nokudaro tinoona kuti pfungwa yekushandura kwepfungwa nepfungwa yemugamuchiri wepfungwa dzinofanira kudzidziswa kuzviita, kana kufambiswa kwekufunga kuchizoitwa nenzira kwayo nehungwaru.
Zvakanaka here kuverenga zvinofungwa nevamwe kuti vaizozvifambisa kana kuti kwete?
Zvirokwazvo kwete. Kuita izvi sekusingakanganwiki uye kusatendeseka sezvakaita kupinda mumwe kudzidza uye ransack uye kuverenga ake zvakavanzika mapepa. Ipo pese munhu paanotumira pfungwa inodhindwa nehunyanzvi hweanotumira uye nekunakisa kana signature. Kana iyo pfungwa iri yemhando iyo iye anotumira asingadi kuti zvizivikanwe, kuyemura kana kusaina kweanotumira anoimaka zvakanyanya sezvatingaisa mucherechedzo envelopu "pakavanzika" kana "yega." Izvi zvinokonzeresa kuti zvisingaonekwe. kune uyo ungazove asina kutendeka anopinda kunze kwekunge pfungwa yasunungurwa mukuumbwa kwayo uye ine hukama nemupambi. Nemasvikiro echokwadi, pfungwa yakadaro yaisazoverengerwa kana kukanganiswa nayo. Dai pasina ichi chipingamupinyi vese vangadai vakave vadzidzisi vemasimba emashiripiti vaigona kuve mamirioni usiku, uye, pamwe, vaizozvibvisa nechero kukosha kwekuwana mari zvakanyanya zvakadaro pachidzidzo kana chakagara. Ivo vaizokanganisa musika wechitoro, voita zvemashiripiti kuvimba nemisika yepasirese, vobva varwiswa vozosvika munguva yakadai sengeya "Kilkenny katsi."